The Top 10 esterter testosterone: inona no mety aminao? | AASraw
/Blog/Gallery/The Top 10 esterter testosterone: inona no mety aminao?
Posted on 12 / 18 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery.
Ny testosterone esters dia azo faritana ho molekila testosterone tena misy vatokely mifamatotra aminy. Ny rojo karbônina dia mifehy ny fatran-tsisintany, amin'ny fomba tsotra, ny tsy fahampian'ny zava-mahadomelina ao amin'ny rànao. Ny tsy fahampiana ny zava-mahadomelina amin'ny rano dia voafaritra amin'ny habetsahan'ny karbôna karbona misy ny ester. Ny rojon'ny karbôna lava dia midika hoe ny Etera ela sy ny ela kokoa, ny fihenan'ny fanafody amin'ny rano. Ohatra, ny propionate testosterone dia ester vita amin'ny rojo rozy karbôna ccc. Amin'ny ankapobeny dia midika izany fa misy rojo rojo vy ao anatin'io testosterone ester.
WNy hatetika dia testosterone esters?
Ny testosterone ester dia nifangaro tamin'ny olona maro, ary tsy dia nahita firy mazava ianao raha tsy ny famariparitana omen'ireo manam-pahaizana maro. Amin'ny teny tsotra dia ilainao aloha ny mahatakatra hoe inona ny esters alohan'ny handehanana hampifangaroana azy amin'ny hormone testosterone. Ester dia fanehoan-kevitra momba ny simika vita amin'ny iray, rojo na rojo rojo. Ny haben'ny ester dia vokatry ny isan'ny rojon'ny karbonina. Azonao atao izao ny mampihatra ny ohatry ny testosterone. Araka ny nohazavaina tetsy ambony, ireo vitsy kely ireo dia manana vata kely fohy kokoa noho ny tsy fisian'ny rano sy ny ra.
Ny vatanao dia afaka manamboatra testosterone voajanahary izay tompon'andraikitra indrindra amin'ny fanorenana ny firaisana ara-nofo sy ny fanorenana. Ho an'ny olona voan'ny testosterone ambany noho ny fahasalamana isan-karazany dia afaka mandeha amin'ny fitsaboana testosterone. Ity dokotera ity dia afaka mandefa medikaly momba ny fitsaboana testosterone maro izay aorian'ny fitsaboana azy ireo dia hifangaro amin'ny ranao ary hanome valiny mitovy amin'ny natiora. Rehefa mihantitra ianao, midina ny famokarana testosterone. Matetika dia avo ny hormone mandritra ny fahazazana sy ny fahatanorana.
Ny fomba hahazoana testosterone vita vita amin'ny molekiolan'ny steroid steroide
Amin'ny taonan'ny 35 taona sy ambony ny hormone testosterone ao amin'ny vatana dia manomboka mitsimoka na dia misy aretina toy ny hypogonadism aza. Ny tsiranoka amin'ny testosteron dia mampiavaka ny karazana iray amin'ny iray hafa, saingy ny maro an'isa dia mitovy ny fiantraikany. Ohatra, ny fivoahana ny faritra fanenana dia ara-dalàna raha mampiasa ny zava-mahadomelina azo ampiasaina ary ny vokany hafa dia ny aretin'andoha, ny tsy fahitan-tory ary indraindray lomotra.
Nahoana isika no mila testosterone?
Ny testosterone dia matetika antsoina hoe hormone lahy. Maro ny olona tsy mahafantatra fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia mamokatra hormonina. Testosterone dia hormonina androgen izay mamorona toetra ao amin'ny vatanao. Vita amin'ny toerana iray ao amin'ny vatanao izany dia mandeha any amin'ny faritra hafa amin'ny alalan'ny rà. Ny hormonina dia vita amin'ny faritra manaraka;
Ny fitsapana amin'ny lehilahy
Ho an'ny vehivavy vokatra ao amin'ny ovy
Ao amin'ny androngo avo indrindra izay eo ambonin'ny voa fantatra amin'ny lahy sy ny vavy.
Ny haavon'ny testosterone dia ambony kokoa noho ny amin'ny vehivavy. Ny tsy fitoviana amin'ny testosterone amin'ny lahy sy ny vavy dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika izay mety ho ratsy kokoa raha tsy voatsabo ara-potoana ny olana.
Ny testosterone esters diagram
kely dia kely
Ny vokatra tsara Tanjaka
Proviron sy Nolvadex
ClomiGen sy NolvaGen
Testosterone cypionate sy testosterone enanthate
Dosis midika 250-750 isan-kerinandro
Antsasak'aina 2-3 herinandro
Water fihazonana Eny
Action Vokatry ny faharetana
Ny vokatra tsara Mihamatanjaka ny heriny
Side effects Ny fihenan'ny volo, ny akne, ny fitehirizana rano ary ny atrophy.
fiarovana Tabakan'i Nolvadex sy proviron isan'andro
Recovery Clomid 1 ny tabilao ho an'ny 20 andro
Testosterone decanoate sy testosterone Isocaproate
Dosis midika 50-100mgs isan'andro
Antsasak'aina Decanoate, herinandro 3-4
Isocaproate 2 herinandro
Water fihazonana kely dia kely
Action Decanoate -delayed
Ny vokatra tsara Tanjaka, hery ary tanjaka.
Side effects Ny fihenan'ny haavo, ny gynecomastia, ny akne ary ny atrophy
fiarovana Lisitry ny 1 ao Nolvadex sy Proviron mandritra ny diany
Recovery Clomid -1 takelaka isan'andro mandritra ny 20 andro aorian'ny andro farany amin'ny fitsaboana.
HCG 2500-5000IU isan-kerinandro, 20days taorian'ny andro farany tamin'ny fitsaboana fitsaboana anao.
Antsasak'aina Tena ela
Dosis midika 1000mg / 14 herinandro
Action Tena ela
Ny vokatra tsara Tsara kokoa ny fanarenana, ny vascularization tsaratsara kokoa, ny tanjaka ary ny hery hery
Side effects Akne, fihenan'ny volo, atrophy ary gynecomastia.
fiarovana Lisitry ny 1 ao Proviron sy Nolvadex isan'andro manerana ny fitsaboana
Recovery Clomid - takelaka iray isan'andro ho an'ny 20 andro aorian'ny fitsaboana.
Dosis midika 250mg / isan-kerinandro
Antsasak'aina 1-3 herinandro
Action Fast and short
Ny vokatra tsara Tsara kokoa ny fanarenana, ny tanjaka ary ny hozatry ny hatsiaka, ny hery entina hanatsarana, ary ny fiompiana tsaratsara kokoa.
Side effects Ny fihenan'ny haavo, ny akne, ny gynecomastia ary ny atrophy.
fiarovana Proviron sy Nolvadex - tabilao 1 mandritra ny fotoan'ny fitsaboana anao
Clomid- 1 takelaka isan'andro mandritra ny 20 andro aorian'ny tsingerina
HCG- mandraisa dipoavatra amin'ny 2500-5000 IU isan-kerinandro mandritra ny 20 andro aorian'ny tsingerinao.
Inona avy ireo mpanamory testosterone 10?
Ny vahaolana amin'ny fitsaboana testosterone dia tsy maintsy mitady fanampiana ara-pitsaboana avy amin'ny klinika akaiky anao indrindra. Ny esters testosterone dia ny fanafody mahazatra ampiasaina amin'ny fitsaboana testosterone ambany sy ny fanorenana ny ratra. Misy karazana testosterone isan-karazany hita ao amin'ny tsena, na izany aza, aza mividy azy ireo fotsiny, ary alaivo ny dokotera mety aminao. Ireo esoeso testosterone dia ampiasaina amin'ny atleta sy mpandàla bodybuilders izay te hanangana ny hozany amin'ny vatany. Ny sasany amin'ireo fitohizan'ny testosterone dia toy izao manaraka izao;
Testosterone Acetate dia anisan'ireo esters testosterone voalohany nampidirina tao amin'ny sehatry ny fitsaboana. Nosoratana voalohany tao amin'ny 1936 io. Ny testosterone acetate dia fanafody haingam-pandeha izay tonga amin'ny endriky ny hormone testosterone lahy. Mamotsotra haingana ao amin'ny rànao izany, izay mahatonga azy ho tsara ho an'ny marary na atleta marobe. Raha ny fampiharana dia manomboka tsy tapaka avy hatrany ny esterate acetate raha mifanohitra amin'ny testosterone hafa izay mety maharitra ela. Noho ny fitsapana fatran'ny fitsaboana fohy ny antsasaky ny fiainana dia tokony haka ambany dosage isaky ny 2 hatramin'ny andro 3 ianao mba hihazonana ny ambaratonga testosterone izay mety amin'ny fahasamihafana.
Mety hampanaintaina ny fampidiran-tsakafo testosterone ka mety hitarika ho amin'ny fivoahana na ny tsy fahasalamana eo amin'ny faritra fanjifaliana. Ireo mpampiasa vaovao dia haka fanaintainana foana mandritra ny fotoana fohy, fa rehefa tapitra ny fampiasanao ny dosage, dia ho tsara ianao. Na izany aza, raha mitohy ny fiantraikany, dia ampahafantaro ny dokotera mba hanome safidy safidy hafa.
Testosterone acetate dosage miankina amin'ny presbyteran'ny dokotera aorian'ny fandinihana ny toe-javatra misy anao. Na izany aza, ny dosie nomerika dia avy amin'ny 100mg, 200mg, 500mg, ary 1000mg saingy Tsarovy fa ny dosia tokony hanome ny vokatra iriana. Ny dokotera dia tokony hozaraina amin'ny dokotera, na isan-kerinandro na isan-kerinandro aorian'ny fitsapana ara-pitsaboana. Ny olona sasany dia mila dingam-pahazotoana kely ary ny hafa kosa hampitombo ny dosage. Aza mividy ny zava-mahadomelina raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera satria mety miteraka fanafody mahery vaika amin'ny testosterone. Raha toa ka atleta ianao dia afaka mandeha amin'ny testosterone acetate bodybuilding izay hanampy anao hampitombo ny hozatrao sy ny vatana.
Miaraka amin'ny CAS NO: 1045-69-8, testosterone acetate dia anisan'ireo steroid haingana indrindra eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao izay nahazo ny fon'ireo mpandatsa-bazana maro be. Ny fanafody dia manomboka miasa haingana avy hatrany rehefa avy naka ny dosage. Izany dia mamoaka ny famokarana hormonina testosterone bebe kokoa ao amin'ny vatanao izay manampy voly isan-karazany hitombo ao anatin'izany ny hozatrao ary handoro ny matavy. Amin'ny maha mpandidy bodista anao, dia takiana aminao koa ny miaraka amin'ny dosage amin'ny fampiofanana sy ny sakafo ara-dalàna ho anao mba hiainana ny vokatra tadiavinao. Ny zava-mahadomelina dia miankina amin'ny endriny am-bava sy amin'ny endriny. Noho izany dia mahaliana anao, ny manapa-kevitra hoe iza no endrika tsara indrindra ho anao. Na izany aza, ny dokoteranao dia ho olona tsara indrindra hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara rehefa avy nandinika ny fitsaboana.
Testosterone Acetate Half fiainana sy ny tsingerina
Ny acetate testosterone no anisan'ireo zava-mahadomelina haingana indrindra dia manana ny antsasaky ny 2 ka hatramin'ny 3 andro ary fitsaboana tsy mihoatra ny herinandro 12. Ny dokotera dia ho tonga amin'ny fitsaboana tsara indrindra sy ny testosterone acetate miankina amin'ny fahasalamanao sy ny zavatra ilainao. Misy ihany koa ny safidy amin'ny dosage isan'andro sy isan-kerinandro, lazao amin'ny dokotera izay azonao atao, ary hanampy anao izy. Azonao atao ihany koa ny mampiasa ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny orana hafa toy ny Proviron mba hampihenana ny fiantraikan'ny vokatra hafa.
Testosterone Acetate soa
Ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny testosterone mainty dia izany;
Manatsara ny fitomboan'ny taova izy io
Manatsara ny hozatra sy ny fanarenana ny vatan'ny olona
Manatsara ny fahatsaran'ny vatana
Ity no zava-mahadomelina tena izy izay azonao entina amin'ny tongotrao aorian'ny fampisehoana ny fomba hanaovana izany amin'ny dokoteranao. Ny testosterone cypionate for sale dia eo ambanin'ny marika Depo-Testosterone, ary afaka mahita izany amin'ny sehatra amin'ny aterineto samihafa na any amin'ny magazay fitsaboana ianao. Amin'ny tranga maro, ny governemanta dia mifehy ny zava-mahadomelina noho ny tanjaka sy ny vokany amin'ny ampahany mety hiteraka raha tsy ampiasaina araka ny tokony ho izy.
Ny testosterone cypionate izay manana ny CAS 58-20-8, dia novolavolaina tamin'ny 1940 vao haingana saingy nampidirina hampiasa ny fitsaboana amin'ny 1951. Ankoatra ny fampiasana ara-pahasalamana, ny zava-mahadomelina dia manampy betsaka amin'ny atleta sy ny mpanao biriky. Manentana ny famokarana hormonina testosterone ao amin'ny vatana izay tena ilaina amin'ny fanatsarana sy fanatsarana ny fitomboan'ny taovam-pandevozana ary hanomezana hery bebe kokoa ny vatana. Araka ny filànao, ny zava-mahadomelina dia natao hampidirana farafaharatsiny indray mandeha isaky ny 1 hatramin'ny herinandro 4. Tsara ny mitsidika ny fitsaboana mba hahafantarana ny doka mety ho an'ny toe-javatra misy anao na ny zavatra ilainao.
testosterone Cypionate fanatanterahana asa
Ny valin'ny testosterone cypionate dia mitovy amin'ny zava-mahadomelina rehetra izay an'ny kilasy misy androgen. Ny steroïde ao amin'ity vondrona mpitsabo ity dia miasa toy izany ary mitondra ny fepetra mitovy. Ny testosterone cypionate dia tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny fihanaky ny homamiadana amin'ny lehilahy satria manolo ny testosterone fa tsy afaka mamokatra ny vatanao. Ny dokotera dia afaka mametraka mora foana ny fitsaboana testosterone sicorpate rehefa dinihina ny toe-javatra misy anao. Ny sasany amin'ireo vokatra mahazatra hafa izay tsapanao aorian'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity dia ny fanaintainana na ny fanodinkodinana manodidina ny faritra fampidirana, ny fananganana maharitra, ary ny aretin'andoha amin'ny hafa.
The Ny vidin'ny testosterone cypionate dia varimbazaha avy amin'ny mpivarotra iray hafa, noho izany dia ataovy ny fikarohanao voalohany hahazo mpivarotra azo itokisana sy azo atokisana izay afaka manolotra dosim-panafody amin'ny vidiny mety. Ny dokotera ihany koa dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanampiana anao hahazo ny doka mety amin'ny testosterone tsara amin'ny vidiny sarobidy. Ny fanesorana doka mahazatra dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika, ka asio mandrakariva ny torohevitry ny dokotera.
testosterone Cypionate levitra
Izany dia zava-mahadomelina tsy azo ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana testosterone cypionate dosage amin'ny 200 amin'ny 800mgs isan-kerinandro. Ny dokotera dia mandefa ny doka mety miankina amin'ny halaviran-tsolika sy ny zavatra tianao hotratrarina amin'ny faran'ny vanim-potoana. Tokony halefa amin'ny tazomina ambony na ny havanao ny fampidirana. Ny dokotera dia afaka manolotra isan-kerinandro na roa herinandro, na afaka mandeha ihany koa ny dosage isam-bolana.
testosterone Cypionate Half fiainana
Steroid ny testosterone cypionate dia manana fiainana mavitrika hatramin'ny 8 andro ary anisan'ny iray amin'ireo fanampiana malaza ampiasain'ny mpandidy bodoy. Ny fitsaboana testosterone cypionate dia tokony haka an-dàlana amin'ny andro 7 mba hahazoana vokatra tsara kokoa.
Ny zava-mahadomelina dia fanamafisana tsara ho an'ireo mpiangaly bodybuilders sy atleta ho avy. Testosterone cypionate manome ny vatanao amin'ny angovo ampy ho an'ny fanatontosana izay manampy anao hahatratra ny hozatra sy vatana izay ilainao. Raha jerena ny vokatra azon'ireo mpampiasa voalohany tamin'ity zava-mahadomelina ity taorian'ny fampidirana azy dia azonao antoka fa izany dia fanafody izay manome fahafahana hivoatra amin'ny asan'ny vatanao. Na izany aza, ho anao ny mahazo ny tanjonao, tsy maintsy miaraka amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny sakafo sy ny fiatoana.
testosterone Cypionate soa
Bilaogera matihanina maro tahaka ity steroid ity hatramin'ny nanomezany vokatra tsara sy nandritra ny fotoana lava be. Azonao atao ny misafidy ny handao ny dosim-bolana, indrindra raha tsy mahazo aina ianao amin'ny herinandro. Hafa testosterone cypionate tombony ahitana;
Ampio amin'ny fihazonana ny hozatry ny fo
Manamora ny fitomboan'ny taova
Manolora vahaolana amin'ny fambolena maharitra
Hampitombo hery sy hery ny tanjaka.
Raha mitady vinaingitra izay hanampy anao hanangana ny hozatrao ianao, hanome hery anao ary handoro ny fatao vatana dia ny testosterone decanoate no vokatra tsara ho anao. Na izany aza, mila mahatakatra ianao fa ny testosterone dia tonga amin'ny endrika isan-karazany ary ny karazana safidy dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny fahombiazanao ankapobeny amin'ny tanjonao. Bilaogera maro no mampiasa STEROIDS TOKONY AMIN'NY TESTOSTERONA mba hanosehana receptors androgen ao amin'ny vatana. Ny zava-mahadomelina koa dia manolotra tombontsoa maro toy ny fanampiana ny fanatsaràna ny firaisana ara-nofo ho an'ireo lehilahy voan'ny aretin-kozatra. Ho an'ny fitomboan'ny taovam-pananahana sy ny faharetana, ity fanafody ity dia mahagaga raha manaraka ny dosie sy ny sakafo mahazatra.
Ny testosterone decanoate dia nahazo ny lazany noho ny vokatra tsara azon'ireo mpampiasa. Tamin'ny voalohany, nampiasaina ny fanafody mba hamahana ny olana eo amin'ny testosterone ambany amin'ny lehilahy, talohan'ny nahatsapany fa afaka manampy ny mpamboly hahatratra ny tanjony izy ireo. Ny zava-misy amin'ny fampidirana ny doka ara-pahasalamana indray mandeha isan-kerinandro dia mahatonga azy ho tiany ho an'ny bodybuilders maro tsy tia ny steroids amin'ny orza. Ny testosterone decanoate koa dia zava-mahadomelina tsara indrindra izay manampy amin'ny fitomboan'ny famokarana sela mena ao amin'ny vatana. Efa taona maromaro taorian'ny fampidirana ity zava-mahadomelina ity, dia manaporofo ny vahaolana tsara kokoa ho an'ny ezaka maro avy amin'ny testosterone amin'ny lehilahy sy ny vehivavy.
Wny testosterone decanoate?
Decanoate dia ester, ary araka izay voafaritra mialoha ao amin'ny lahatsoratra, ny ester dia fikambanana organika izay manampy amin'ny pharmacokinetics amin'ny singa iray. Amin'ny teny tsotra dia manampy amin'ny fitondrana ny zava-mahadomelina amin'ny vatanao izany ary misy fiantraikany lehibe amin'ny fiaviany amin'ny vatanao. Ester dia mamaritra ny antsasaky ny fiainan'ny zava-mahadomelina sy ny hafiriana hijanona ao amin'ny vatanao. Testosterone decanoate bodybuilding dia manana ny antsasaky ny andro 7, izay midika fa tsy ilainao fotsiny ny mitsabo ny zava-mahadomelina indray mandeha isan-kerinandro. Midika izany fa ny testosterone decanoate toy ny deca dia fanafody tena tsara ho an'ny lehilahy izay manana fahasarotana amin'ny fihazonana ny hozatry ny foza.
Testosterone Decanoate HAlf fiainana
Taorian'ny fitsaboana anao dia mijanona ao amin'ny vatanao ny zava-mahadomelina ho an'ny 7 ka hatramin'ny 10 andro. Noho izany dia tokony halaina farafaharatsiny indray mandeha isan-kerinandro ianao. Araho ny torolalan'ny dokotera mba hahitana vokatra tsara kokoa ary hahatratrarana tsara ny tanjonao.
Testosterone Decanoate levitra
Ho an'ny tanjon'ny taovam-pandevonan-tsakafo, ny testosterone fitsaboana nomerika faran'ny 250mgs mankany 1000mgs isan-kerinandro. Ho an'ny mpandray anjara izay haka 250-500gms isan-kerinandro dia ho tsara, fa ny doka kosa dia mety hitombo amin'ny dingana manaraka. Ny sakafo sy ny fampiofanana tsara dia tsara indrindra amin'ny fanatrarana ny vokatra sy ny tombontsoa lehibe indrindra.
Testosterone decanoate soa
Ny fitsaboana testosterone fototra dia hahasoa anao amin'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity;
Miezaha mafy hanatsara ny fitomboan'ny taova
Manatsara sy manohana ny hozatry ny foza
Ampitomboy ny angovo na ny hery manontolo.
Amin'ny lafiny iray, ny testosterone decanoate vs. cypionate dia afaka miasa toy izany ary manome ny vokatra mitovy ihany, fa ny fahasamihafana dia tonga amin'ny antsasaky ny fiainana. Amin'ny decanoate testosterone, ianao dia mila miditra dose iray isan-kerinandro raha toa ka tsy maintsy hampiditra anao manokana farafaharatsiny indray mandeha ao anatin'ny roa na telo andro ny cypionate. Ny fiantraikany lehibe amin'ny zava-mahadomelina dia ny fanesorana ny famokarana voajanahary amin'ny testosterone ao amin'ny vatanao izay midika fa tsy ho afaka hanangana ny muscle ilaina ny vatanao aorian'ny famitana ny tsingerin'ny rongony. Miankina amin'ny tanjaky ny vatanao, dia mety hisy fiantraikany hafa mampiavaka izay mety henjana indraindray raha tsy mampiasa ny doka mety ianao. Azonao atao, ohatra, ny hatsembohana, ny tsy fahitan-tory na ny akne indraindray. Araho foana ny torolalan'ny dokotera ary raha misy vokany ratsy dia ampahafantaro azy.
Izany dia fanafody fanindroany izay tsara indrindra amin'ny fitsaboana ny toe-pahasalamana vokatry ny testosterone ambany, toy ny tsy fahampian'ny fananganana hozatra, ny fahaleovan-tena na ny faharetan'ny fahamaotiana sy ny tsy fahasalamana hafa. Ny dokotera iray dia tokony handrotsaka ny testosterone enanthate satria ny fampiasana azy dia mety hiteraka vokatra tsy mety hitranga.
Ny fitsaboana testosterone dia anisan'ireo steroid indrindra anabolika malaza indrindra hatramin'ny nanafahana azy tamin'ny tsena tao amin'ny 1930s. Hatramin'izao dia mbola eo anelanelan'ny steroid indrindra ny zava-mahadomelina avy amin'ny bodybuilders sy ny atleta maro. Tamin'ny voalohany, ny steroid dia tsy mifamatotra amin'ny ety rehetra izay nahatonga ny zava-mahadomelina haingana ho entina amin'ny rà. Tao amin'ny 1937, nanomboka nametraka ny fanafody miaraka amin'ny akora simika ny mpanafatra izay nanova ny zava-drehetra ao amin'ity steroid ity. Tamin'ny taona 1950, nanapa-kevitra ny mpanamboatra zava-mahadomelina fa hampidirina ao anaty fanafody misy tsiranoka miaraka amin'ny zava-mahadomelina izay manome hery ny ankamaroan'ny mpandinika bouddha ankehitriny.
Testosterone enanthate 250 no fampiasana fanafody mahazatra izay hitanao eny an-tsena. Na izany aza, ny dokotera dia afaka manamboatra ny doka rehefa mandinika ny toe-javatra misy anao. Ho an'ireo atleta, ity zava-mahadomelina ity dia tsy hanampy anao hanatsara ny fahaizanao, fa hanampy anao hahatratra ny vokatra tadiavinao izany. Testosterone enanthate bodybuilding dia manampy hitarika ny hozatrao ary hifehezanao ny tavy ao amin'ny vatanao. Rehefa manohy ny fanazaran-tena ara-batana tsy tapaka ianao, dia hahatratra ny hozatry ny taolana sy ny vatana tianao. Raha toa ianao ka tsy mahazo ny valiny izay tena tsy fahita firy, mifandraisa amin'ny dokotera mba hanampy anao.
Ny testosterone enanthate for sale dia azo alaina amin'ny isan-isan-pampianarana isan-karazany, ary ny fivarotana amin'ny aterineto, na izany aza, mividy ny zava-mahadomelina eo ambanin'ny torohevitra momba ny fahasalamana. Ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina dia mampidi-doza raha toa ka tsy mahazaka loatra na mampiasa tsy ampiasaina ary tsy azo ovaina mihitsy. Mba ho eo amin'ny lafiny azo antoka dia avelao ny dokotera hiteny ny doka tokony ho anao. Rehefa vita ny fitsaboana testosterone dia tokony ho afaka hahita ny valiny ianao, ary raha tsy mahita ianao, dia lazao amin'ny dokotera.
testosterone Enanthate levitra
Dokotera maro no tia ny dosage ho an'ny testosteron ho an'ny antenimiera raha toa ka tonga amin'ny dosie samihafa ny zava-mahadomelina. Ohatra, ny tahan'ny zava-mahadomelina dia zaraina araka ny tanjona tianao hahatratrarana bebe kokoa raha toa ka bodybuilder ianao - ny tahan'ny standard ho an'ny zava-mahadomelina avy amin'ny 250mg isan'andro ho 750mgs isan-kerinandro. Amin'ny toe-javatra sasany, ny bodybuilders dia mitondra dosie avo hatramin'ny 1000mgs isan-kerinandro. Ny dosage dia azo ekena ihany koa amin'ny alàlan'ny tsingerinao, satria ny dosie ambany dia atokisana izay azo ampitomboina any aoriana.
Testosterone Enanthate HAlf fiainana
Ny fepetram-pampianarana Testosterone dia manana halavitr'asa mavitrika mandritra ny 10.5 andro, ary tokony haka ny doka ho an'ny dosinao aorian'ny andro 10 ianao. Na izany aza, ny dokotera dia afaka manamboatra dose tsara isan-kerinandro mba hahafahanao mahazo hery sy fanorenana hozatra.
testosterone Enanthate tsingerin'ny
Ny testosterone enanthate dia manana cycles isan-karazany arakaraka ny level, ary ny dokotera dia ho eo amin'ny toerana tonga lafatra mba hamolavola ny tsara indrindra ho anao. Ohatra, ny fitsaboana testosterone enanthate fanombohana dia ahitana ny fampiasana dosie kely sy orala hafa toy ny Arimidex sy Deca-Durabolin. Ny tsingerim-pivoarana hafa izay dingana faharoa, dia mihabe ny dosage rehefa ampiasaina amin'ny dosage ny mpandidy. Ny zava-mahadomelina eto dia ampiasaina miaraka amin'ny Dianabol 40mgs isan'andro ho an'ny tsingerina manontolo. Ny fiaramanidina Hardcore no ambony indrindra izay tena tsara ho an'ireo mpampiasa matihanina Testosterone enanthate, ary eto dia avo dia avo ny dos.
Testosterone enanthate advantages
Io zava-mahadomelina io dia voaporofo fa tena ilaina amin'ny fampivoarana ny asan'ny bakteria sy ny atleta. Rehefa azonao tsara ny zava-mahadomelina dia afaka manome ny fiantraikany isan-karazany, ny tombontsoa azo avy amin'ny testosterone enanthate izay ahitana;
Ampitomboy ary manatsara ny fitomboan'ny hozatra
Ampiasao ny fanarenana ny vatan'ny olona taorian'ny loza na ny fitsangatsanganana nandritra ny fiatoana.
Ampitomboy ny hery sy tanjaka manerantany izay manampy ireo atleta sy bakteria hanatratra ny tanjona napetrany.
Manaova fatin-doko ary manampia bodybuilders hahazoana ny endriky ny vatana izay ilainy.
Ny Testosteron phenylpropionate (BAN) (marika hoe Testolent), na phenylpropionate testosterone, izay antsoina ihany koa hoe testosterone hydrocinnamate, dia nanamboatra steroid anabolic-androgenic (AASraw) ary ny etrogen ester - mazava ho azy, ny C17β phenylpropionate ester ny testosterone - izay nisy taloha tany Romania nandroso. Izy io dia nampidirina voalohany tao amin'ny siansa momba ny siansa tao amin'ny 1955 ary dia singa iray natao ho an'ny singa fandraharahana vitsivitsy avy amin'ny AAS, saingy tsy nampiasaina betsaka. Ny testosterone phenylpropionate dia toy izany koa ny ampahany amin'ny Sustanon sy Omnadren.
Ny Phenylpropionate Testosterone dia navoaka voalohany tao amin'ny tsena tao amin'ny 1955 avy amin'ny Casa Sicomed Pharmaceutical fa nivarotra teo ambanin'ny anarana hoe Testolent. Tsy nisy ny zava-mahadomelina na dia teo amin'ny tsena mainty aza rehefa navoaka. Na dia izany aza, tao anatin'izay taona vitsy lasa izay dia nahitana azy io ary nahazo tsindrim-peo avy amin'ny mpibolobelona sy ny atleta. Ny zava-mahadomelina dia ampahany amin'ny testosterone hafa toy ny Omnadren.
Ny testosterone phenylpropionate dia fanafody napetraka ao amin'ny vondron'olona androgens. Ny testosterone phenylpropionate dia zava-mahadomelina izay tokony halefa amin'ny alalan'ny tsindrona. Aorian'ny fisotroana dia mbola mijanona mandritra ny dimy andro ny zava-mahadomelina aorian'izany dia afaka mitondra doka hafa. Azo ampiasaina amin'ny fomba mahaleotena ny fitsaboana na ny fitsaboana amin'ny testosterone hafa amin'ny fitsaboana testosterone ao amin'ny marary iray miaraka amin'ny tsy fahampian'ny testosterone. Amin'ny lafiny iray, ity fampiasana zava-mahadomelina malaza ity dia tena tsara ho an'ny fanatsarana ny vatana sy ny hery hozatra.
Ny marika mendrika izay tokony hieritreretin'ny mpiserasera momba ity zavatra ity dia ny fisian'ny fihetseham-po toy izany indraindray indraindray. Ankoatr'izay, amin'ny fakana testosterone phenylpropionate, ny bakteria dia milaza tebiteby ny faniriana, ny heriny ary ny kalitaony. Amin'ny ankapobeny, amin'ny fampiasana ity karazana testosterone ity amin'ny fomba mety ny fiantraikany dia toy ny an'ny testosterone hafa ihany saingy tsy mitaky fitsangatsanganana lehibe izany, na miteraka rano.
Testosterone phenylpropionate advantages
Ity steroid ity dia nanan-daza tamin'ny mpiangaly bodybuilder noho ny fiantraikany tsara teo amin'ny vatany. Ny sasany amin'ireo fantatra testosterone phenylpropionate ahitana;
Manatsara ny fananganana ny ovy amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fitazonana azota.
Ny fanamafisana ny hery ara-batana ankapobeny, ka ahafahan'ny atleta miasa mandritra ny fotoana maharitra ary mahazo vokatra tadiavina. Manatsara ny fahombiazan'ny mpandidy bodista sy atleta izany.
Fanamboarana ny famokarana sela mena ao amin'ny vatana.
Harovana sy mandoro ny fatin-doko.
Testosterone Phenylpropionate HAlf fiainana
Ny testosterone phenylpropionate dia zava-mahadomelina manjavozavo miaraka amin'ny antsasaky ny fiainana 3 hatramin'ny andro 4. Ho voatery hitondra ny dosinao indray ianao ao anatin'ny 4 andro. Ny dokotera mpitsabo matihanina dia tokony hikarakara ny tsimokaretina.
Maro amin'ireo atleta na bakteria no mampiasa io fanafody io indroa isan-kerinandro na aorian'ny roa andro. Ny marina testosterone phenylpropionate dosage dia manomboka amin'ny 300gm ka hatramin'ny 3000mg isan-kerinandro. Na izany aza dia tsy dia mafy loatra ny fiantraikan'ny vaksin-taolana phenylpropionate raha oharina amin'ny an'ny steroids hafa.
testosterone Phenylpropionate tsingerin'ny
Ny testosterone phenylpropionate steroid dia azo ampiasaina miaraka amin'ny ety hafa fohy amin'ny latsaky ny herinandro 10-herinandro. Ny fitsaboana phenylpropionate testosterone tena tsara dia tokony hahitana ny tsiranoka fanandramana fitsapana izay manana dosage ny 300mg isan-kerinandro ary ny NPP ara-panafody miaraka amin'ny dosage 300mg isan-kerinandro koa. Ny herinandro fohy dia tokony ho folo herinandro ho an'ny mpandidy biriky.
Isocaproate dia ester mifandray amin'ny steroid anabolic. Etera izany izay mety mifandray amin'ny steroïdes toy ny Cypionate malaza Enanthate esters. Toy ny Cypionate sy Enanthate, ny isocaproate koa dia azo ampidirina amin'ny hormone testosterone, na izany aza, noho ny Isocaproate, ity dia matetika no toerana voalohany hitantsika miaraka aminy. Testosterone-Isocaproate, endri-tsoratra monoester izay tsy mahatsiaro; Amin'ny fotoana mety hahitanao azy, dia mihoatra noho ny mety ho fitakiana amin'ny fikarakarana laza izy io, ary tsy ilaina ny fananana testosterone Isocaproate amin'ny maha-tokana azy. Ny toerana misy ny Isocaproate ester ary matetika ny tanjon'ny tetikasa dia ny testosterone; manaiky omnadren ary Sustanon 250. Omnadren sy Sustanon-250 dia samy mifototra amin'ny testosteron miaraka amin'ny esters 4 mifamatotra; Estera efatra amin'ny loko samihafa izay mamorona sela testosterone iray.
Ny testosterone Isocaproate dia ester, ary azo ampiasaina raha toa ka tafiditra amin'ny steroids toy ny Omnadren sy Sustanon 250. Ny tantaran 'ity ester ity dia azo tsapain-tanana avy amin'ny 1970 raha navotsotra an-tsena ny Sustanon 250. Ny anjara andraikitry Isocaproate ester dia ny mamela ny zava-mahadomelina haharitra ela kokoa ao amin'ny vatanao ary mamela fanangona steroid hafa miasa amim-pahombiazana. Ny esoterika isocaproate dia manome steroids amin'ny antsasaky ny androm-piainana amin'ny andro 7-9.
Testosterone Isocaproate levitra
Koa satria ny Isocaproate dia tsy misy mahaleotena, ny testosterone dosocaproate dosage dia miova arakaraka ny toerana nampidirana azy. Ohatra, ao amin'ny Sustanon 250 ny fampidirana ity mpihinana ity dia 60mgs ary ny dosage an'ny Sustanon 250 dia miova avy amin'ny 250mgs mankany 1500mgms isan-kerinandro. Ny dokotera dia mandefa ny doka tsara indrindra ho anao, arakaraky ny zavatra ilainao.
Testosterone Isocaproate Half fiainana
Ny Testosterone Isocaproate dia manana ny antsasaky ny androm-piainan'ny 7-9 andro izay midika hoe ny fanafody steroid rehetra mifandray amin'ity ezter ity dia tokony horaisina indray mandeha isan-kerinandro. Na dia mamita ny tsingerinao aza ianao androany, dia mbola hankafy ny vokatry ny rongony ianao mandritra ny roa andro manaraka.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny testosterone Isocaproate dia mifototra amin'ny fitoviana toy ny Omnadren sy Sustanon 250 ary azo alaina amin'ny kilasy roa mifanintona; Ny hery azon'ireo toetra etsy ambony ary ny zavatra mampiavaka an'io karazana io dia mifanohitra amin'ny endri-tsoratra tokana. Araka ny nodinihina teo aloha, ny tanjaky ny testosterone manga dia ny hanomezana tsaratsara kokoa ny tontolon'ny zava-manan'aina anankiroa amin'ny heviny kely sy tsy misy dikany, ary manome azy io ho an'ny testosterone haingana be izay misy fiantraikany maharitra. Mety hitranga izany raha kely dia tsotra, fa ny fahamarinan'ilay raharaha dia tsy misy zavatra hafa mihoatra noho izany. Amin'io fotoana io, manana tombontsoa sasany isika mianakavy amin'ireo toetra voalaza etsy ambony, ary satria ampiasaina amin'ny famonoana tanteraka i Omnadren sy Sustanon 250, dia hifantoka amin'ny tombontsoa ihany isika amin'io hazavana io.
Ho an'ny atleta ivelan'ny vanim-potoana, ny tsirairay izay manantena ny hanana volabe sy kalitao goavam-be, ny fanapahan-kevitr'i Isocaproate dia fanapahan-kevitra tonga lafatra satria izy ireo dia handroso amin'ny lafiny roa. Ankoatr'izay, amin'ny alalàn'ny tontolo manodidina metabolika, dia vonona ny hahazo vatana madio miaraka amin'ny tsy fahampian'ny hozatra amin'ny fetran'ny fatotra, ary tsy misy vidiny izany. Azo ampiasaina amin'ny famolahana koa ny fifangaroana mitovy amin'izany; Ny zava-drehetra dia mihevitra fa ny fihoaram-pefy dia mampihena ny fahafaham-pitenenana matavy, ary ny testosterone dia mpanamboatra tavy mavesatra, fanapahan-kevitra manjelanjelatra ho an'ny rafitra rehetra.
Io no testosterone estertera fohy indrindra izay mamafa haingana ao amin'ny rà. Noho izany, raha mila vokatra haingana ianao, dia ny testosterone propionate no safidy tsara ho anao. Na izany aza, ny fitsaboana dia manana ny antsasaky ny androm-piainan'ny iray andro. Noho izany dia tsy maintsy mametraka ny fanafody isan'andro ianao mandra-pahatongan'ny fifaranan'ny tsingerina. Ny vidin-tsolika testosterone dia miompana amin'ny mpivarotra iray hafa ary ny dosage izay nofidinao. mampitaha testosterone propionate vs cypionate, momba ny fahombiazanao dia afaka mifidy ny propionate hatramin'ny miasa ao anatin'ny iray andro, fa tsy maintsy mandray ny dosinao isan'andro.
Tahaka ny hoe steroids hafa, ny propionate testosterone dia novolavola tamin'ny 1930 voalohany ary mikendry ny hanampy amin'ny fanatsarana ny halavan'ny hormonina testosterone ao amin'ny vatana. Ny zava-mahadomelina ankehitriny dia malaza maneran-tany amin'ireo mpiblaogy, satria manaporofo fa tena ilaina izy ireo amin'ny fanampiana azy ireo hahatratra ny tanjony. Efa am-polo taonany izao dia mitombo ny fangatahan'ny zava-mahadomelina amin'ny fiheverana ny tombontsoa omen'ny mpampiasa izay ahitana tombony ho an'ny hormone testosterone toy ny fanorenana hozatra. Ny toetra mampiavaka an'io hormone io dia antony iray hafa amin'ny fangatahana avo lenta.
Testosterone Propionate levitra
Ny fanandramana fivoahan'ny testosterone propionate dia mangataka anao hanomboka amin'ny dosages kely izay mifanakaiky amin'ny 50-100mgs azo alefa aorian'ny 2-3 andro. Ny dose isan-kerinandro avy amin'ny testosterone propionate dia avy amin'ny 200 ka hatramin'ny 500mgs.
Ny zava-mahadomelina dia mety hiteraka fiantraikany mahery vaika ho an'ireo vao manomboka izay mahatsapa dipoavatra be loatra. Ny dokotera dia hanome anao dosage mety rehefa avy nandinika ny toe-javatra misy anao. Hahatsapa ny fiantraikany ianao testosterone propionate taloha sy aoriana mandray izany. Tadidio foana ny manaraka ny torolàlana momba ny dosage. Na izany aza, raha tsy mahazo aina amin'ny dose isan'andro ianao dia afaka mandeha mandritra ny volana iray.
Testosterone Propionate Half fiainana
Ny tabilao mipetaka amin'ny testosterone dia manana ny antsasaky ny ora 24 saingy ny jiro mitetika dia manana fiainana mavitrika hatramin'ny herinandro 4. Ny dokotera dia hamolavola ny faran'ny dosie farafahakeliny izay hahatonga anao hahazo ny vokatra tianao.
Taorian'ny navotsotra tao amin'ny tsena tao amin'ny 1930s ny zava-mahadomelina. Nosedraina izy io ary nanaporofo fa manampy ny fanamafisana ny tanjaky ny vatan'ny olona sy ny fanatsarana ny fanorenana. Ny zava-mahadomelina dia manome ny hozatra amin'ny sakafo mahavelona izay ahafahan'izy ireo mampitombo ary rehefa mampiasa ny fampiasana araka ny tokony ho izy dia azo antoka fa hahatratra ny vatana mangatsiaka ilaina amin'ny fanatanjahantena. Ny fisian'ny hormonina testosterone ao amin'ny vatanao dia midika fa hahazo tombontsoa maro ianao raha tsy amin'ny fananganana ny hozatra toy ny fanatsarana ny toetran'ny olona toy ny fanalefahana ny feo sy ny fitomboan'ny volom-bolo eo amin'ny maro hafa.
Na izany aza, ny fitsaboana amin'ny dokotera anao dia ny fomba azo antoka indrindra hahitana ny valin'ny fanandramana testosterone. Ny fimenomenonana na ny fivoahana manodidina ny faritra fanonerana dia ara-dalàna, saingy tokony hanjavona izy aorian'ny fotoana iray raha toa ka tsy mandeha ny vokany dia miverena amin'ny dokotera avy hatrany. Ny fizarana ny zava-mahadomelina amin'ny bodybuilders hafa dia mety hampidi-doza satria tsy azonao antoka ny fihetsika fanafody amin'ny vatanao. Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia tena ilaina mialoha sy aorian'ny fametrahana ny testosteron propionate dose.
testosterone propionate soa
Manampy ny hozatra ny hozatry ny fo
Manosika ny firaisana ara-nofo
Mitombo ny fitomboan'ny taova
Afeno ny tavy.
Sustanon 250 steroid dia zava-mahadomelina fanafody ho an'ireo lehilahy mijaly amin'ny famokarana testosterone voajanahary sy ny habetsahany mandà ny tombontsoa maro. Ny Sustanon 250 dia mamela ny mpampiasa hampivelatra ny toetra maha-lahy azy, toy ny fanalefahana ny feony, ny fanatrehana ny hozatra ary ny fitomboan'ny volo eo amin'ny vatana na ny tarehy.
Sustanon 250 dia steroid izay novolavolan'ny Organon Company tao amin'ny 1970 mba hanampy ny olona fa tsy afaka mamokatra hormones testosterone ampy ny vatany. Nanjary nalaza ny zava-mahadomelina tao anatin'ny fotoana fohy taorian'ny namoahana azy teny an-tsena satria hita fa tena vahaolana ho an'ny atleta maro sy mpanao biriky maro izany. Ny Sustanon 250 dia natao tamin'ny fampifandraisana ny testosterone 4 samihafa, izay ahitana ny 30mg amin'ny propionate testosterone, ny phenylpropionate 60mg-testosterone, ny decanoate 100mg-testosteron, ary ny 60mg-isocaproate. Ny firafitra dia mahatonga ny vokatra ho mahery vaika sy mahasoa ho an'ny mpamboly bodybuilders sy ny olana hafa amin'ny testosterone hafa.
Ahoana ny fametrahana Sustanon 250
Ity fanafody fanafody ity dia omena indray mandeha isan-kerinandro na aorian'ny andro 3 noho ny heriny izay ahafahany miasa ao amin'ny vatanao mandritra ny andro maromaro. Na dia izany aza dia voararan'ny fikambanana manohitra ny doping ity zava-mahadomelina ity, noho izany dia tsy tsara ho an'ny atleta mavitrika. Azonao atao ny mampiditra ny fanafody amin'ny tenanao na amin'ny fandaharam-potoana fitsidihana tsy tapaka ao amin'ny toeram-pitsaboana mba hahazoana ny fitsaboana amin'ny dokotera. Ny antsasaky ny zava-mahadomelina dia tena mendri-piderana ka mahatonga azy ho tsara ho an'ny mpampiasa maro fa hijery foana ny dosages mba hisorohana ny fiantraikany.
Sustanon 250 ho an'ny bodyguilding
Amin'ny ankapobeny, tsy ampy ny hormonina testosterone ao amin'ny vatanao, dia ho sarotra ny hahatratra ny tanjaky ny arintany izay irinao ho toy ny bodybuilder. Na inona na inona ny fihinanana na ny fanatanjahan-tena ataonao isan'andro, dia mila manana hormones lahy ianao mba hampitombo ny fahaizanao. Ny zava-mahadomelina dia miasa amin'ny fanentanana ny vatanao mba hamokarana estrogen mihoatra, ka hahatratra ny level testosterone. Sustanon 250 manampy amin'ny famahana ny olana rehetra ateraky ny halatra testosterone ambany, anisan'izany ny fananganana sy fihazonana ny hozatry ny foza.
Testosterone Sustanon 250 levitra
Ny dosage mety Sustanon 250 ho an'ny bodybuilders dia tokony hifanaraka amin'ny 250mgs -1500mgs isan-kerinandro. Na izany aza, ny 500-750mg dia matetika ny dose mipetaka isan-kerinandro. Ny olona sasany dia mety hahatsapa ho tsy mahazo aina amin'ny soso-kevitra ao Sustanon 250 aorian'ny telo andro fa hahatonga ny doka isan-kerinandro ho hevitra tsara.
Inona ny fandrosoana Sustanon 250?
Ny tombony faran'izay manan-danja izay ho tianao rehefa mampiasa io zava-mahadomelina io dia testosterone tsy tapaka mandritra ny telo herinandro aorian'ny fampidirana. Izany dia midika fa hanana ny hery entina ilaina sy ny fiarahan'ny firaisana ara-nofo amin'ny fanandramana testosterone hafa. Etsy ankilany, raha mila fanafody mandritra ny fotoana lava ianao, dia mila mandini-tena amin'ny fitsaboana ianao mba hanaraha-maso ny mari-pahaizana testosteronanao. Tsarovy fa mety hampidi-doza ny halatra hormonina ambany na mihoatra. Tombontsoa lehibe iray hafa azonao raisina amin'ny fahazoana io zava-mahadomelina io dia mampitombo sy mitazona ny hozatry ny foza.
Testosterone Sustanon 250 tsingerina
Ny cycles Sustanon 250 dia ahitana orza hafa satria tsy afaka mahazo ny hozatry ny leo ianao, amin'ny fampiasana an'i Sustanon irery ihany. Ity ny faribolan'ny Sustanon;
1 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
2 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
3 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
4 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
5 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
6 500mgs / herinandro 40mgs / edisiona 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
7 500mgs / herinandro NIALA 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
8 500mgs / herinandro NIALA 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
9 500mgs / herinandro NIALA 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
10 500mgs / herinandro NIALA 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
11 500mgs / herinandro NIALA 25mgs / edisiona 25mgs / edisiona 7caps / edisiona 600mgs / herinandro
* ed dia midika isan'andro / isan'andro
Zava-mahadomelina efa ela no tonga ao anaty capsule na endrika fanindroany. Ny safidy dia anao foana, fa ny karazana dosie roa dia tsy mitovy amin'ny fahombiazany. Ny zava-mahadomelina dia tena tsara ho an'ny lehilahy voan'ny testosterone ambany na ny vatany tsy afaka mamokatra hormone tena ilaina. Ny Undecanoate testosterone dia afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny toetran'ny lahy, toy ny fanalefahana ny feo, ny fizarana ary ny fanorenana.
Testosterone undecanoate dia novolavolaina tao amin'ny 1980's avy amin'ny Organon Drug Company izay mikendry ny hanome zava-mahadomelina testosterone izay tsy mandeha amin'ny aty. Ankoatra izany, ny zava-mahadomelina dia hevi-dehibe hamoronana anabolic steroid (AASraw) izay afaka manampy amin'ny fitsaboana ny famokarana testosterone ambany amin'ny lehilahy. Na izany aza, ny fampidirana ireo esoeson-tena hafa izay manaporofo fa matanjaka kokoa amin'ny famoahana vokatra, ny testosterone undecanoate dia mihena tsikelikely ny laza eo amin'ireo mpiangaly bodybuilders sy atleta maro.
Ahoana do Testosterone undecanoate asa
Ny andekanoate testosterone dia mamakivaky ny rafi-pitilanana fa tsy ny aty tahaka ny steroids hafa. Noho izany, miditra ao amin'ny renirano ny zava-mahadomelina raha tsy afindra na ateraky ny atiny izay midika fa mankafy ny fiantraikany tanteraka. Ny dingan'ny fitsaboana ao amin'ny vatanao dia mampiavaka azy amin'ny steroid hafa methylated.
Ny hormonina ara-pananahana testosterone dia manana anjara toerana manan-danja eo amin'ny vatana amin'ny fahaverezan'ny alatsinainy, ny fahazoana tanjaka ary ny fanorenana hozatra amin'ireo toetra hafa. Maro ny atleta sy ny mpahay bozaka manararaotra io zava-mahadomelina io mba hanatsarana ny hozany sy hanatsara ny asany. Na dia lazaina fa steroid aza ny testosterone tsy afa-miaina, dia mety hisy vokatra tsara eo amin'ny fanorenana ny atianao sy ny fiasanao rehefa mihinana fanafody ambony miaraka amin'ny sakafo mahasalama ianao.
Na izany aza, ireo izay tsy mampiasa tsara ny zava-mahadomelina dia hahatsapa ny vokatra hafa izay azo tsaboina raha mifandray amin'ny dokotera amin'ny fotoana. Testosterone andecanoate bodybuilding dia mety ho tsara raha mandeha ho an'ny testosterone tsipika tsy afa-poana izay azonao alaina ao anatin'ny 10 na 14 herinandro. Miankina amin'ny toe-pahasalamanao ny dokotera hanamboatra ny dosage sy ny fitsaboana ho an'ny testosterone tsy afa-daoka ho anao. Ny capsules dosage de testosterone undecanoate ny antsasaky ny fiainana dia mihazakazaka mandritra ny iray andro, ary ianao dia tsy maintsy mandray ny dosinao isan'andro.
testosterone Undecanoate soa
Ny sasany amin'ireo tombontsoa tsy voatanisa amin'ny vozona dia misy;
Hihena ny fatiantoka matavy
Hampitombo ny fihetseham-po
Ampitombo ny fahatokianareo
Ampitomboy ny firaisana ara-nofo
Ahitsio ny tebiteby
Ho an'ny bodybuilders na atleta, ny dososter testosterone tsy afa-poana dia manodidina ny 480mg isan'andro. Na izany aza, ho an'ny mpampiasa voalohany, ny dokotera dia afaka mampihena ny doka ary hampitombo azy amin'ny fotoana. Rehefa manapa-kevitra ny hampifangaro ny zava-mahadomelina amin'ny steroids hafa ianao, dia ho tsara ny 200-250mgs. Tokony alaina alohan'ny sakafo ny fanafody alohan'ny sakafo maraina sy hariva alohan'ny sakafo.
testosterone Undecanoate tsingerina
Azonao ampiasaina ity steroid ity miaraka amin'ny orana hafa toy ny deca Durabolin, trenbolone ary promobolan. Raha manapa-kevitra ny hampiasa ny andriol amin'ny orana hafa ianao, dia azo atao ny mampiasa azy amin'ny dosia ambany toy ny 240mg isan'andro. Ny andriol dia ho toy ny toeram-pitsapana ary hanome orza hafa ny fahafahana miasa tsara raha tsy misy vokany fanampiny.
1 250mg / ED 600mgs / herinandro 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / herinandro 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / herinandro 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / herinandro 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / herinandro 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ED dia midika isan'andro isan'andro na isan'andro
Izany dia fanafody anabolic izay novolavolain'ny 1961 tany Alemana Atsinanana tamin'ny alàlan'ny Pharmaceutical Jenapharm Company ho fitsaboana aretim-bozaka. Nanjary nalaza ny zava-mahadomelina taorian'ny nilazana ny fahombiazan'ny Olympiana Alemana tamin'ny 1960s ho 1980s. Turinabol dia ampiasain'ireo atleta sy mpandidy bodybuilders hanatsarana ny volombavany sy ny hozany miaraka amin'ny hery entin'izy ireo hitondra azy ireo mandritra ny hetsika ataony. Ho an'ny mpanao biriky, azonao atao ny tanjona tsy azo tratrarina raha toa ka mampiasa tsara ny zava-mahadomelina ianao.
Ahoana do Turinabol asa
Ny dosin turinabol dia azo alaina ao anaty endrika kapoza ao am-bava. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Tsy misy TOKOA VAROTRA, ary ny zava-mahadomelina ihany no misy ao amin'ny laboratoara ambanin'ny tany. Ny fangatahana ny zava-mahadomelina dia mitsangana amin'ny fiheverana ny fiantraikan'ny fampiroboroboana ataon'ireo mpampiasa azy. Ny zava-mahadomelina dia fantatra amin'ny hoe mahomby amin'ny fanatsarana ny fampiasana proteinina hozatra, hanatsarana ny habetsahin'ny haavo amin'ny fitiliana azota ao amin'ny hozatra ary koa ny fitomboan'ny famokarana sela mena. Ny hodi-doko turinabol dia miankina amin'ny zavatra ilainao, saingy azonao atao ny mandray 50mg isan'andro isan-kerinandro na roa herinandro. Na izany aza, ny dokotera dia afaka mamolavola ny fitsaboana tsara indrindra ho anao rehefa mandinika ny fahasalamanao.
Turinabol (Tbol) dia mijoro ho steroids tsara indrindra ho an'ny atleta maro sy mpandidy maro noho ny tombotsoa lehibe ananany amin'ny fanatsarana ny haavon'ny angovo sy ny fanatsarana ny hozatra. Miaraka amin'ny zava-mahadomelina miaraka amin'ny sakafo mahasalama sy ny fampiofanana tsara dia ho azonao antoka ny hahazo vokatra tadiavina. Ny steroid dia manome ny vatanao miaraka amin'ny proteinina tena manan-danja izay ahafahan'ny vozona maniry sy mandoro ny vatana. Amin'ny fampiasana io zava-mahadomelina io, dia tsy voatery hisalasala momba ny fiantraikany eo amin'ny sehatra estrogenika toy ny tsy fahitan-tory, ny fitehirizana rano, ary ny tosidra ambony. Noho izany, ireo izay miantraika amin'ny fihenan-tsasany izay mety hampiadana azy amin'ny zava-mahadomelina.
Ny sasany amin'ireo tombontsoa avy amin'nyTurinabol dia ho tianao amin'ny fampiasana ity fanafody ity;
Ampitomboy ny tanjaka
Manomeza hozatra mafy
Tiavo ny valiny raha tsy mahazo lanja
Tsy dia misy fiantraikany eo amin'ny lafiny hafa
Hanatsara ny vokatra voajanahary amin'ny hormone testosterone
Ny nomerao Turinabol dosage ho an'ny lehilahy dia 20 amin'ny 50gms isan'andro, ary azonao ampiasaina miaraka amin'ny orala hafa mba hahitana vokatra tsara kokoa. Nisy ny fiheverana diso, fa toy ny bodybuilder ianao dia tokony hampiasa dosie avo mba hahazoana vokatra. Ny vehivavy dia tokony hampidirina kely dosinabolan'ny 2.5 amin'ny 7.5mgs isan'andro satria ny dosage avo dia mety hitarika amin'ny virilization.
Turinabol Half fiainana
Turinabol (Tbol) dia manana ny antsasaky ny ora 16. Noho izany dia tokony hitondra ny dosage indray mandeha isan'andro ianao - na izany aza, ny bodybuilders sasany dia manasaraka ny dosage amin'ny faran'ny ora roa 12 izay tsara ihany koa ny hitazona ny salan'ny ra.
Ity steroid ity dia azo ampiasaina miaraka amin'ny orana hafa toy ny Dbol, N2Guard, ary Cardarine mba hahitana vokatra tsara kokoa ary hampihenana ny vokatra hafa.
* Eo isaky ny andro.
Iza ity testosterone ity no mety aminao?
Amin'izao fotoana izao ianao dia mahita ny fijerin'ny testosterone tsara indrindra azonao eny an-tsena, ny fanamby izao dia tonga amin'ny famaritana ny tsara ho anao. Ny olona dia samy manana fanehoan-kevitra samihafa amin'ny zava-mahadomelina isan-karazany, izay mety ho fiasa ho an'ny namanao dia mety ho tsy lavorary ho anao. Manana kompositra hafa ny olona, ​​ary ny dokotera tsara dia handinika foana ny fahasalamanao aloha alohan'ny nisafidianana ny fanafody mety.
Ny olana amin'ny testosterone ambany dia mila fitsaboana manokana mba hahazoana vokatra tadiavina. Ohatra, raha mizara ny hevitry ny vahoaka ianao dia hisy hilaza aminao fa ny aketa dia ny tsara indrindra, ny hafa dia manondro anao hividy cypionate na even decanoate. Ny fomba tsara indrindra fidirana ny fitsaboana testosterone dia ny hahita dokotera iray ary hanazava ny olana mahazo anao, dia hanolotra ny zava-mahadomelina mahasoa izy.
Inona ireo torohevitra momba ny fisafidianana ireo esoesona testosterone mety aminao?
Ny nofinofin'ny bodybuilder rehetra dia ny manana endrika tsara tarehy, ny fitondran-tena manontolo, ary ny hozatra mahery. Na izany aza, ny toe-javatra sasany toy ny famokarana testosterone ambany ao amin'ny vatana dia mety handà anao ny fahafahana hahomby amin'ny asanao.
Ny ankamaroan'ny bakteria dia mampiasa ny testosterone esters mba hahatratrarana ny hozatra ilainy aorian'ny fikarakarana mahery vaika. Raha ny tena izy, ny vatanao dia tsy manana testosteron ampy hanamboarana ny hozanao ary hanome anao ny hery ilainao amin'ny maha bodista anao. Ny dikany ilainao hanatsarana azy ireo amin'ny esters mifanaraka amin'izany.
Koa ahoana no fisafidiananao ireo esoeso testosterone mety?
Amin'izao fotoana izao, ny tsena dia feno karazana testosterone samihafa izay mety ho sarotra ho anao ny mifidy ny tsara indrindra. Ny marika rehetra dia mihambo ho tsara indrindra ary manolotra vahaolana amin'ny olana misy anao. Na izany aza, mila mitandrina ianao raha mitady fanampiana amin'ny mpitsabo matihanina. Diniho ireto torohevitra manaraka ireto rehefa misafidy ny mpitsabo testosterone mety;
1. Fantaro izay ilainao
Alohan'ny hitsidihanao ny dokotera, dia azonao aloha ny olana. Ohatra, raha toa ka tsy mahavita ny hozatra ilaina amin'ny hozatra ianao na dia te-handoro ny tadin'ny vatanao aza ianao, dia ho mora ny mamantatra ny fanafody tsara indrindra ho an'ny dokotera. Ireo esoeso testosterone dia manana singa miavaka amin'ny famahana olana iray. Ny hafa dia tonga lafatra ho an'ny olona voan'ny aretina isan-karazany, fa ny hafa kosa tsy tokony ampiasaina amin'ny fanafody hafa. Aza manao fahadisoana amin'ny fividianana ny zava-mahadomelina avy amin'ny fivarotana akaiky anao indrindra raha tsy misy tari-dalana momba ny fahasalamana ara-pahasalamana. Hanao vivery ny ainao ianao, satria mety hisy fiantraikany amin'ny fahasalamanao izany.
2. Karazana testosterone esters
The testosterone Tonga amin'ny fomba samihafa ny boosters sasany ny sasany dia voajanahary raha ny hafa dia fanafody fitsaboana. Ny dokotera anao dia ho tsara toerana hamaritra ny karazana tsara indrindra ho anao rehefa mandalina ny fahasalamanao. Tena ilaina ny hery entinao rehefa mandray an'io zava-mahadomelina io; Ny vatanao dia mety tsy mety tsara amin'ny fanampiana fanampiny. Indraindray miankina amin'ny filànao testosterone, ny dokotera dia hahafantatra ny karazana mety hanampy anao hahatratra ny tanjonao.
3. Quality sy fahombiazana
Ny testosterone ester dia manao toy izany, fa ny fahasamihafana dia tonga amin'ny fahombiazan'izy ireo. Marika samihafa no manana halavola hafa, ny sasany amin'ireo zava-mahadomelina dia mila alaina indray mandeha isan-kerinandro amin'ny andro 2 na 3. Ny filanao dia hitarika ny mpitsabo anao amin'ny fisafidianana ny ordinateur mamiratra ho anao. Raha tsy mahazo aina amin'ny esters testosterone ianao, dia azonao lazaina amin'ny dokotera hoe mitady voka-dratsiny.
Ny tendrony manan-danja indrindra amin'ny fisafidianana na fampiasana ny booster testosterone dia ny fidirana amin'ny dokotera amin'ny dingana rehetra. Ny fikarakarana ny voka-dratsiny dia mety ho lafo ary indraindray tsy mety hamadika ny toe-javatra ianao. Aza manamarina velively ny vidiny rehefa misafidy ny fichier testosterone mety izy satria azo atao ny mividy ny vokatra mora raha mandehandeha ny vokatra mora indrindra. Na izany aza, aza tapahina koa ny bankinao amin'ny zava-mahadomelina, diniho ny fahombiazan'ny kalitaon'ny vokatra andrasanao.
Guercia, C., Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Fandinihana ireo esoeson-tsefo avy amin'ny testosterone ao amin'ny fihanaky ny molekiolan'ny molekiola amin'ny alalan'ny chromatographie amin'ny ranon-tsarimihetsika goavam-be. Steroids, 123, 67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., ary Gillyar, C. (2018). S. Patent Application No. 15 / 714,541.
Tykerb (231277-92-2) -Nanararaotra ny totozy tetezana
10 zavatra tsy maintsy fantatrao alohan'ny handraisanao ny DMAA Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao momba ny dianabol-poopy